Kumwe kusahadzika nezve huwandu hweiyo iPhone X yakatengeswa kusvika zvino | IPhone nhau
Kumwe kusahadzika nezve huwandu hweiyo iPhone X yakatengeswa kusvika zvino
Tevere 1 yeFebruary isu tinogona kunyatsoziva huwandu hweiyo iPhone X yakatengeswa kusvika zvino, kusvika ipapo zvese fungidziro. Mazhinji mafemu eWall Street ari kutanga kuburitsa huwandu hwavo uye kuzviwana ivo pazasi pevaya vakafanotaurwa neApple. Kunyangwe iwo ari manhamba akanaka, avo veCupertino vangangodaro vaitarisira zvimwe kubva kuchiteshi kwavakaisa mari yakawanda.
Vanoongorora veCLSA vanochengetedza kuti kota yechina ya2017 ichave iri nani pane yekutanga ya2018 kubvira Vaya vaida kutora iPhone X muna Zvita 2017 vanotova nayo. Muchokwadi tanga tichiona maitirwo akawedzera sei mushure mekushambadzira kwayo asi nekufamba kwenguva, kudiwa kwadzikira.
Kutendeukira kuchinetso chisingafanire kunge chiri: iPhone X kutengesa
Chipiri chapfuura chirevo cheTaiwan chakasvika pamaoko edu icho chakatsanangurwa icho Apple yaizo dzikisa ayo ekufanofungidzira ekutengesa kweiyo iPhone X mukota ino ye 30 mamiriyoni, pazasi pechirongwa chekutanga che Mamirioni makumi mashanu emayuniti. Kwayakapihwa iwo ruzivo haazivikanwe uye paWall Street vazhinji vaitarisira kuti vataure kubva kune vari muCupertino asi vakavavimbisa izvozvo havaiti kuongororwa kwemishumo yekunze.
Inotevera CLSA inoongorora inopokana kuti chero fungidziro kubva kuQ1 2018 pamusoro pe Mamirioni makumi matatu nemashanu mayuniti akakwirira zvakanyanya, sezvo zvichitarisirwa kuti zviteshi zvinotengeswa hazvipfuure huwandu ihwohwo, nhamba iyo Apple yaisatarisira pakapera kota yekupedzisira yegore rapfuura.
Izvo zvikonzero zveichi chakaderera kudiwa chinowanikwa mune chavo mitengo yakakwira. Uye, sekutaura kwandamboita kare, vaongorori vekambani iyi vakavimbisa kuti avo vashandisi vaida iPhone X mukota yekupedzisira ya2017 vakatowana kare uye nekudaro, izvo zvishandiso zvinotarisirwa mukota yekutanga yegore rino, zvakamira muQ4 Mune maonero angu ndinotenda kuti data ndizvo zvazviri uye chokwadi chinofanira kuratidzwa mune data iro richapihwa zviri pamutemo musi waFebruary 2017, asi zviri pachena ndezvekuti kudonha kunogona kuitika mukuda vaizoita vatengesi iyo data ichagaya nekuda kwekutarisira kukuru pane chikamu cheApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Kumwe kusahadzika nezve huwandu hweiyo iPhone X yakatengeswa kusvika zvino
Zvisinei nekusahadzika, Apple ichagadzira iwo manhamba sezvainoita nguva pfupi yadarika uye munhu wese achiombera nekupururudza. Pane imwe nguva iyo yakajeka ichauya pachena.
Canary Inozivisa Nyowani, Inotengeka Kamera uye Alexa Kuenderana
Apple inoburitsa iOS 11.2.2 ye iPhone ne iPad kugadzirisa bugs